Banyere Anyị - Changzhou Lingdian Wood Co., Ltd
Wood ọka Emboss Series
Changzhou Lingdian Wood ụlọ ọrụ e hiwere na 2003. Anyị osisi ebe bụ 80,000 square mita. Anyị bụ ndị na-eduga na enterprise na ubi nke vinyl flooring, wpc vinyl flooring na SPC flooring na China.
N'ihi na vinyl flooring, anyị ike bụ na ihe karịrị 150 containers kwa ọnwa; N'ihi wpc vinyl flooring. Anyị ike bụ na ihe karịrị 150 containers kwa ọnwa; N'ihi na SPC flooring, anyị ike bụ karịa 50 containers kwa ọnwa.
Anyị ụlọ ọrụ alread gafere ISO9001 quality management usoro asambodo, ISO14001 gburugburu ebe obibi management usoro asambodo na OA asambodo si TUV ule ụlọ ọrụ. Anyị nwetara patent ikike nke Unilin ma laminate flooring na vinyl flooring. Good mmepụta igwe, ezi ule igwe na-echesinụ quality ịchịkwa na-anyị na ngwaahịa na elu àgwà larịị.
Anyị ukwuu nchịkwa mmadụ na mbupụ ahụmahụ, na elu management-eme ka anyị dị nnọọ asọmpi na mma ụlọ ọrụ. Anyị ugbu a na-mbupụ 95% nke anyị mmepụta ka USA, Canada, South America na East Europe na na. Anyị lekwasịrị bụ ezitekwara anụ ma na elu-edu onu ahia ka ị na-eme ka ndụ gị ka mma.
Welcome n'ụwa nile enyi ileta anyị ụlọ ọrụ maka inwekwu imekọ ihe ọnụ.